HALKAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE 23-OCT 2021
Saturday October 23, 2021 - 08:09:14 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farm aajo iyo ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Ro oble ayaa heshiis ka gaaray khilaafkii u dhaxe eyay, sida uu shaaciyey xafiiska ra’iisul wasaar aha. Qodobada heshiiska ayaa waxaa ka muu qda inuu tanaasulay ra’iisul wasaare Rooble, isaga oo ogolaaday in meesha laga saaro tali yihii hay’adda NISA ee uu magacaabay, oo ah eyd xudunta khilaafka labada mas’uul.
Heshiiska ayaa waxaa sidoo kale qeyb ka ah in kiiska Ikraan Tahliil loo daayo hay’adaha cadaaladda, hase yeeshee waxaa hay’adda NISA baaqi kusii ah qaar ka mid ah dadkii kiis ka lagu tuhmayey, taasi oo shaki gelineysa in ay caddaalad heli karaan qoyskeeda.
1- Ayada oo la tixgilinayo dib udhaca kuyimid jadwalka doorashooyinka ayaa madaxda w axey isku raaceen in la dardar geliyo howlaha doorashooyinka, waxeyna ugu baaqeen dowl adaha xubnaha ka ah Dowlada Federaalka Soomaliya in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku bilaabaan asbuucyada soo socda doorashada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaal ka Soomaaliya.
2- In si dhaw ay u wada shaqeeyaan hay’ adaha Amnigu iyaga oo xoogga saaraya adka ynta amniga iyo xasilloonida guud ee dalka xil ligan xaasaasiga ah ee dalku ku jiro doora shooyinka, Lana xoojiyo ladaagalanka argag aaxisa ee Alshabaab.
3- In Wasiirka Aminiga Cabdullahi Maxa med Nuur uu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka.
4- In Jeneraal Bashiir Goobe, oo uu Rooble horey ugu magacabay taliyaha NISA, loo mag acaabo wasiiru dowle.
5- Madaxda ayaa isku raacay In Yaasin Ca bdulahi Maxamuud (Farey) uu ahaado kusim aha Taliyaha hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka (HNSQ) inta Madaxweynahu uu soo marsiinayo Ra’iisul Wasaaraha Taliye iyo Taliye kuxigeen kadibna La soo marsiinayo Golaha Wasiirada, si madaxweynuhu ugu soo saaro digreeto.
6- Madaxda ayaa isku raacay in kiiska Ikr aan Tahliil Faarax loo daayo Hay’adaha Cada aladda iyo Garsoorka, waxaana la faray hay’a daha amnigu in ay gacan ku siiyaan.
Ugu danbayn, Madaxda Qaranku waxay u mahad celiyeen Madaxweynaha Dowlad Gobo leedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Moxamed (Lafta gareen) iyo masuul iyiinta kale ee udhabar adaygay sidii madmad owgii madaxda qaranka ka dhexjirey loogu dhameyn Lahaa Isfahan iyo afgarad, doorash aduna usocoto si habsami leh.
Madaxda waxa ay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed sida ay uga xunyihiin walwalkii ay dareemeen maalmihii la soo dhaafay iyaga oo u ballanqaaday shacabka in si midnimo leh ay uga wada shaqayn doonaan sidii ay dalka u ga dhicilahayd doorasho hufan loona adkayn lahaa amniga guud ee dalka.
Siyaasiyiin iyo xildhibaano ka fal-celiyey HE SHIISKA ay gaareen Farmaajo iyo Rooble
Siyaasiyiin dhowr ah ayaa ka hadlay he shiiska ay Habeen hore Villa Som alia ku gaareen Madaxwey ne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra’iisul was aare Maxamed Xus-een Roo ble ee lagu xaliyey khilaafkii u dhax-eeyay.Qodobada heshiiska ayaa waxaa ka muu qda inuu tanaasulay ra’iisul wasaare Rooble, isaga oo ogolaaday in meesha laga saaro tal iyihii hay’adda NISA ee uu magaca-abay, oo aheyd xudunta khilaafka labada ma-s’uul.
Inta badan siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Soo maaliya ayaan weli ka hadlin aragtidooda ku aadan heshiiska, hase yeeshee waxaa ka ha dlay dhowr xildhibaan iyo murashax madaxwey ne Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Mas’uuliyiinta ka hadlay heshiiska ayaa yiri:
Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi: Meel wanaags an ayaa la dhigay Heshiiska, waana mudan ya hay in la bogaadiyo. Madaxweyne Cabdicasis Laftagareen waa ku mahadsan yahay inuu ku guulaystay dhammaynta kala aragti duwanaan tii madaxda qaranka ka dhex jirtay.
Xildhibaan Maxamed Abtidoon: Waxaan bo gaadinayaa heshiiska madaxda Qaranka Xalay ka gaareen khilaafkii ragaadiyay hawlih ii qaranka. Waxaan ugu hambalyeenayaa mad axweynaha Koonfur galbeed mudane Cabdic asiis Laftagareen guusha uu ka gaaray heshiis iinta madaxda qaranka. Waxaan talaabadaan ka baraneynaa in musuulkii daacad iyo dhex dhexaad ka ah xal u helidda khilaaf jira in uu Allah ku guuleynayo. Cabdikariin Xuseen Guuleed: Waa soo dhaweynayaa heshiiska ay Xalay madaxda do wladda ka gaareen khilaafkii siyaasadeed ee intii muddo ahba dhexdooda ka jiray. Waxaana u arkaa in is fahamkaas iyo heshiiskaas uu qeyb weyn ka qaadan doonno dadajinta door ashooyinka Qaranka. Si dalka uu oga baxo firaaqa dastuuriga ah ee uu ku jiray.
Madaxweyne Laftagareen waa ku amaana yaa waana ku bogaadinayaa dowrka odaytini mo ee uu qaatay iyo mudada gaaban ee uu gu usha oga gaaray soo abyidda khilaafaadka hareeyay nidaamkii dowdnimo ee dalka.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa weerar culus ku qaaday Amisom iyo Guddiga Midowga Afrika (AUC), xilli ay weli taagan tah ay xiisadda ka dhalatay qorshaha howlgalka Amisom loogu beddelayo mid ay ku mideysan yihiin QM iyo Midowga Afrika.
Wasaaradda Arrimaha Dib edda Sooma-aliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in kadib go’aankii kasoo baxay Golaha Ammaanka iyo Nab ad-Galyada Midowga Afrika ee ku baaqay howlgal sidaas ah 7-dii October, ay Muqdisho ku casuuntay wafdi ka socda Guddiga Midowga Afrika (AUC) iyo Amisom.
Qoraalka ayaa lagu shee-gay in kadib ay dhinacyada wada-hadallo yeesheen 12-kii iyo 14-kii October, si looga wada-xaajoodo xal ay dhinayada ku wada qanci karaan, waxna loogu wada darso warbixinta Golaha Amma-anka QM uu soo saarayo 15-ka November.
"Nasiib darro Howlgalka Midowga Afrika iyo AMISOM waa ay diideen inay taageeraan war-saxaafadeed wadajir ah oo lagu muujinayo horumarka ay illaa hadda sameeyeen dowlad da federaalka Amisom iyo AUC, oo saldhig loo ga dhigayo in dowladda federaalka aysan taa geerin baaqa Golaha Ammaanka iyo Nabad-galyada Midowga Afrika,” ayaa lagu yiri qora alka Wasaaradda Arrimaha Dibedda."Waa nasiib darro in AUC iyo AMISOM ay doorteen waddo carqaladeyn iyo dib-u-dhigis ah intii la wada shaqeyn lahaa.”
Dowladda federaalka ayaa sheegtay inay si joogto ah u diiday howlgalka QM iyo Mido wga Afrika, ayna taageereyso qorshaha ay ciidamada Soomaaliya Amisom ugala wareeg ayaan amniga. "Dowladda federaalka waxay Amisom iyo AUC ugu baaqeysa inay si deg deg ah ugu soo biiraan dowladda federaalka soo loo dhameystiro war-saxaafadeed wadajir ah,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka Mido wga Afrika.
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Soomaa-liya ayaa sheegtay in dowladda Serbia ay ka mid noqotay waddamada Qaa-radda Yurub ee lagu tagi karo baasaboorka Soomaaliya.
Warbixin ay soo saartay hey’adda ayaa lagu sheegay in arrintaan ay ku timid dadaal ay bixi yeen safiirka Soomaaliya ee Serbia Maxamed Cabdullahi Axmed, Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiy adaha.
Sidoo kale, warbixin ta ayaa lagu sheegay in safaaradda Soomaa liya ee Belgrade Serbia si rasmi ah u gudbisay muunadda saxda ah ee Baasaboorka Sooma aliya.
Kaaliyaha Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dhinaca Qunsuliyadaha Marwo. Vera Vukićević oo ay weheliso Ku-xigeenkeeda Marwo Mirja na Živković ayaa Safaaradda ka guddoomay Muunadda saxda ah ee Baasaboorka Jamhuu riyadda Federaalka ah Soomaaliya sedaxdiisa nooc.
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha ayaa tallaabadaan horumarka ah uga mahadcelisay Safaaradda Soomaaliya ee Belgrade iyo Diplo maasiyiinta howshan fududeeyay.
Baasaboorka Soomaaliya ayaa waxaa hor ay u aqbalay in lagu tago qaar kamid ah wadamada Caalamka, waxaana la filayaa inay dhawaan aqbalaan dalal kale
Afar Senator oo Shalay lagu doortay Magaalad Kismaayo
Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland ayaa Shalay Magaalada Kismaayo ku doortay afar Senator, kuwaa oo ku biiraya Senatoradii 29-kii bishii July lagu doortay magaaladaasi.
Illaa sideed musharax ayaa ku tartamayay afarta kursi ee Jubbaland uga harsaneyd Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federa alka, oo metelaad ahaan ay ku leedahay illaa sideed kursi.
Shan ka mida musharaxiintaasi waxay ahaayeen haween, iyadoo laba kursina ay si gaar ahi ugu tartameen haween oo keliya.
Xasan Daahir Yarow ayaa ku guuleystay kursiga shanaad, ka dib markii uu tartanka kaga adkaaday Cali Maxamed Cali.
Ibraahim Awgaab Cismaan ayaa isna ku soo baxay kursiga lixaad, iyadoo ay kursigaasi kula tartameysay Farxiya Macalin Cabdi.
Layla Nuux Maax iyo Xareedo Maxamed Sheekh oo ku tartamay kursiga toddobaad ayaa waxaa ku soo baxday Layla Nuux Maax.
Kursiga ugu dambeeya ayaa waxaa ku guuleysatay Maryan Faarax Kadiye, taa oo ka guuleysatay Zamzam Maxamed Bishaar.
Tani ayaa ka dhigan in Maamulka Jubbaland uu si rasmi ah u soo dhameystiray Doorashada Senatorada Aqalka Sare.
Culima’udiinka ururka Ahlu-Sunna Waljam aaca oo maalmihii u dambeeyay uu kulan uga socday magaalada Muqdisho ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay uga deyrinayaan xiisadda ka taagan Galmudug
Daahir Axmed Salaad oo kamid ah culimada Ahlu-Sunna ayaa war baahinta u aqriyay war-saxaafadeedkaas ,wuxuuna sheegay in maamulka Qoor Qoor uu dhagaha ka fureystay baaqyada nabadeed.
Waxay ku macneeyen xiisada Guriceel iyo dagaalka ka dhanka ah hogaanka Ahlu-Sunna in uu yahay mid caqiido, oo lagu baabi’inayo dalka, sida ay ku sheegen Culima’udiinka qor aalkooda.
"Marka ay arkeen in ciidamadii furimaha ca dowga ku horjoogay loo daabulayo si loogu dagaalamo Culima’udiinka Ahlu-Sunna Waljam aaca, markay arkeen fatwooyinka is-daba joo ga ah ee lagu baneysanayo dhiiga Culima’u diinka Ahlu-Sunna, waxay isla qaateen in uu yahay mid ku saleysan caqiido” ayaa lagu yiri qoraalka.
"In aan dalka la gelin dagaal caqiido, kaasi oo haddii uu billowdo aan la ogeyn halka uu ku dhamaan doono, dibna loo soo celiyo ciidam ada la dul geeyay magaalada Guriceel. In la ogolaado wada-hadal shuruud la’aan ah, dha maan waxa la isku khilaafsan yahay lagu dham eeyo miiska dushiisa.”
Sidoo kale waxay ku baaqeen in la joojiyo caburinta lagu hayo dadaalada nabadeed, isla markaana xabsiga laga sii daayo dhamaan od ayaasha ku baaqay nabada, kuwaasi oo ku xir an saldhigga booliska M/Dhuuso mareeb.
"In dadka barakacay la siiyo kalsooni ay guryahooda ugu soo laabtaan, loona fidiyo gar-gaar bini’aadantinimo,” ayaa lagu yiri war-saxa afadeedka ay soo saareen Culimadda Ahlu- Sunna ee magaalada Muqdisho.
Ugu dambeyntiina waxa war-saxaafadeed ka ayaa waxa lagu sheegay in Culimu’diinka Ahlu-Sunna ee Muqdisho ay iska dhex doorte en guddi ka shaqeeya nabadeynta Galmudug, ayaga oo ugu baaqay dhinacyada isku haya maamulkaas ay si buuxda ula shaqeeyan guddigaas ayna qaatan nabadda.
Arrintan ayaa ku soo aadeysa saacado un ka dib markii ciidamada ammaanka Galmudug ay magaalada Dhuusomareeb ku xireen qaar ka mid ah odayaal shir ku yeeshay magaalada, sida ay ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen Caasimada Online.
Odayaasha ayaa la geeyey saldhigga boo liska magaalada Dhuusomareeb, waxaana sa babta odayaasha loo xiray lagu sheegay inay tahay soo jeedintooda ku saabsan wada-hada llo lala galo, taasi oo madaxweynaha Galmu dug Axmed Qoor Qoor uu kasoo horjeedo.
Khilaaf Soo Kala Dhex Galay Wasaara da Isboortiga Iyo Guddiga Olombikada Soomaaliyeed
Wasaaradda Dhallinyarada iyo Isboortiga ayaa soo saartay war-saxaafadeed kaga soo horjeesaty doorashada ay qabsadeenguddiga Olombiyada Soomaaliyeed, waxaana ay mag acawday guddi ka soo tala bixiya doorashada ay qabsadeen Guddiga, taasi oo ay Wasaaraddu ku sheegtay inay baalmarsan tah ay sharciga u degsan dowladda.
Sida aan wada ogsoonnahay dalka waxaa ka jira dowlad nidaam dastuuri ah oo ku salay san sharci kala dambeyn, dowladduna waxa ay u igmatay arrimaha isboortiga iyo dhallin yaradda (Wasaaradda Dhallinyarada iyo Isboor tiga) oo ka mas’uul ah jaangooynta horumari nta siyaasadda isboortiga dalka guud ahaan, gaar ahaan horumarinta arrimaha garoomada, tartamada, tababarada iyo la shaqeeynta Was aaradaha Dhallinyarada iyo Isboortiga Dowlad Gobaleedyada iyo Gobalka Banaadir.
Haddaba, annagoo ogsoon in uu dhamma day mudo xileedkii Guddiga Olombikada Soo maaliyeed lagama maarmaanna ay tahay in la qabto doorasho loo siman yahay oo ay kawada qayb geli karaan dhammaan bahweynta Isboo rtiga Soomaaliyeed ayaa Wasaaradda Dhallin yarada iyo Isboortiga waxa ay qoraal u qortay Guddiga Olombikada Soomaaliyeed 2dii bishii October ee sanadkan ujeedadiisuna ahayd soo gudbinta xilliyada ay dhacayaan doorashooyin ka Guddiga Olombikada Soomaaliyeed iyo Xiri irrada Isboortiga ayadoo ay la socoto xeer hoo saadyadooda si ay Wasaaraddu ugu diyaariso guddigii qaban laha doorashooyinkaas .
Nasiib darro, waxaa na soo gaaray in ay dhacday doorashadii Guddiga Olombikada So omaaliyeed taariikhdu marka ay ahayd 20ka October 2021, ayagoo iska indha tiray qoraalkii Wasaaradda Dhallinyarada iyo Isboortiga.
Sidaa daraadeed, Wasaaradda Dhallinyara da iyo Isboortiga waxa ay si buuxda u cadayn aysaa:
Inay Wasaaraddu goob joog ka ahayn door ashadii dhacday iyo in aysan aqoonsanayn wixii ka soo baxay.
Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga wa xay magacaawday guddi ka soo tala bixiya do orashada ay qabsadeen Guddiga Olombikada Soomaaliyeed
khilaaf soo kala dhex galay wasaarada isb oortiga iyo guddiga olombikada soomaaliyeed
khilaaf soo kala dhex galay wasaarada isboort iga iyo guddiga olombikada soomaaliyeed
Dowladda Federaalka Oo Deeq Ku Wareejis ay Maamulka Jubbaland
M/Kismaayo ayaa waxaa gelinkii dambe ee Shalay gaaray wafdi ka socday Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo uu hoggaaminayay Wasiirka Maaliyadda xilgaarsiinta Cabdiraxm aan Ducaale Beyle.
Wafdiga ayaa waxaa Garoonka diyaarada ha kusoo dhaweeyay Mas’uuliyiin kala duwan oo ka tirsan Maamulka Jubbaland, waxaana intaas kadib loo galbiyey dhinaca Xarunta Mad axtooyadda Maamulka ee Kismaayo. Ujeedka wafdiga ayaa waxaa uu yahay sidii ay ugu kuur geli lahaayeen xaaladda aba araha baahsan iyo biyo la’aanta ee ka jirta Gob olada Jubbaland, kuwaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo duunyada.
Madaxweynaha D/G Jubb aland Axmed Maxamed Isla am Axmed Mad oobe, ayaa Xarunta Madaxtooyada ku qa abilay wafdiga ka socday DFS oo uu hoggaaminayay Wasiir Cabdira xmaan Ducaale Beyle. Sidoo kale wa fdigan ayaa waxaa ay deeq kala duwan oo ka kooban qalab Caafimaad ku wareejiyeen Was aarada Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Jubbaland, si loo gaarsiiyo dadka ay same eyeen abaaraha baahsan ee ka jira Jubbaland.
Maalmo kahor ayey aheyd markii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee xilgaa rsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu ku dhawa aqay in Xukuumadda ay Gargaar deg deg ah gaarsiineyso dadka ay abaarahu ku saameey een deegaanada Jubbaland.
Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Sooma aliya Marwo Khadija Maxamed Al-makhzoumi oo la kulantay Taliyaha guud ee ciidamada Badda ee dowladda Bakistaan ayaa waxa ay kawada hadleen iskaashiga ciidanka badda ee labadadal.
Sidoo kale labada masuul ayaa muujiyay sida ay uga go’ antahay xoojinta iyo sida ay muhiim utahay in iskaashiga dhanka ciidanka ah badda uu dhex maro labada loogu b aahanyahay.
"Waxaan kulan Iskaashi Ciidan Badda Ah aan la yeeshtay Taliyaha Guud Ciidamada Bad da Amjad Khan Niazi. Waxaan ka Wada Hadal nay Soomaaliya iyo Pakistan Sida aan u Xoojin laheyn Iskaashi Ciidan Ee Bada Ah” ayey tiri Khadija Maxamed.
"Dowladdaha Soomaaliya iyo Pakistan oo ka wada hadlay sameynta Iskaashi Ciidan Ee Badda Ah oo dhexmara Labada Wadan” ayaa lagu yiri Qoraal ka baxay xafiiska safaarada So omaaliya ee dalka Bakistaan.
Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal Oo Dalab U Diray Maamulka Galmudug
Guddiga doorashooyinka heer Federaal ay aa dowlad Goboleedka Jubbaland ku bogg aadiyay dhameystirka doorashada kuraasta Aqalka Sare ee BF ee ku harsaneyd Jubbb aland.
Guddiga ayaa sidoo kale ku bogaadiyey Jub baland sida uga soo dhalaalay bu uxinta qoondada haweenka ee 30%, iyagoona maamulada ee dal ka ka dalbaday in ay xil iska saar aan meelmarinta qoondada hawe enka
Guddiga doorashooyinka ayaa ca ddeeyay Xubnaha Aqalka Sare ee ilaa hadda la doortay inay yihiib 52 xubnood oo ka mid ah 54-ta xubnood ee Goluhu ka koobanyahay, la bo (2) xubnood oo keliya ayaa ku dhimman Maamul Goboleedka Galmudug.
Qoraal soo saareen Guddiga doorashooyin ka ayaa waxaa ay Maamulka Galmudug ugu baaqeen inuu soo dhameystiro doorashada la ba kursi ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Fed eraalka ee ku harsan Maamulkaas..
"Xubnaha Aqalka Sare ee qoondada hawe enka ay ka heleen waa 14 xubnood oo u dhi ganta 26% tirada guud ee Aqal Sare ka ko obanyahay” ayaa lagu yiri Qoraalka ay soo saa reen Guddiga doorashooyinka heer Federaal.
Ugu dambayn, Guddiyada doorashooyinka dal ka ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar garoow xoogan ugu jiraan hirgelinta doorashooyinka Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarl amaanka oo dhawaan la filayo inay bilaabato
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koo nfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed (La ftagareen) ayaa ka hadlay heshiiskii ay gaa reen madaxweynaha waqtiga ka dhacay ee So omaaliya Maxa med Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’sulwasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Lafta Gareen ayaa sheegay in si buuxda loo soo afjaray khilaafkii mudada ka dhaxee yey madaxweynaha iyo Ra’isulwasaa raha kaa soo ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil Faarax.
Laftagareen oo garwadeen ka ahaa wada-hadallada labada mas’uul ayaa sheegay in si kalsooni leh oo wanaag ku jiro lagu dhamee yay khilaafka kadib dadaal dheer iyo iskudayo badan oo ay sameeyeen.
Sidoo kale, Madaxweynaha Koonfur Galbe ed ayaa u mahad celiyay Madaxweyne Farm aajo & Ra’iisul Wasaare Roole oo uu sheegay inay tasaasul muujiyeen, wuxuuna sheegay in dadka Soomaaliyeed ay walwal ka qabeen khilaafka Madaxda.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in dham aan madaxda dalka ay wada Shaqeyn doona an ayna meesha ka baxday kala aragti duwan aantii jirtay haatana la guda galayo howlaha doorashooyinka.
1- Ayada oo la tixgilinayo dib udhaca ku yimid jadwalka doorashooyinka ayaa madaxda waxey isku raaceen in la dardar geliyo how laha doorashooyinka, waxeyna ugu baaqeen dowladaha xubnaha ka ah DFS inay sida ugu dhaqsiyaha badan kubilaabaan asbuucyada soo socda doorashada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
2- In si dhaw ay u wada shaqeeyaan hay’a daha Amnigu iyaga oo xoogga saaraya adkayn ta amniga iyo xasilloonida guud ee dalka xilli gan xaasaasiga ah ee dalku ku jiro doorashoo yinka, Lana xoojiyo ladaagalanka argagaaxisa ee Alshabaab.
3- In Wasiirka Aminiga Cabdullahi Maxam ed Nuur uu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka.
4- In Jeneraal Bashiir Goobe, oo uu Roob le horey ugu magacabay taliyaha NISA, loo ma gacaabo wasiiru dowle.
Ciidamada Ahlu Sunna oo madaafiic culus ku garaacay ciidamada GAL MUDUG ee weerarka ku ah Guriceel